Amazwi kaNkulunkulu ashiya abantu bezenwaya amakhanda; kungathi, ngenkathi ekhuluma, uNkulunkulu akamnaki umuntu ukhuluma emoyeni, kungathi akanamcabango nhlobo ekuthini anake izenzo zomuntu, akanaki ngokuphelele ukwakheka komuntu, kungathi amazwi awakhulumayo awabhekisiwe ekuqondeni kwabantu, kodwa akamnaki umuntu, njengoba kwakuyinhloso yokuqala kaNkulunkulu. Ngenxa yezizathu ezingebalwe, Amazwi kaNkulunkulu awaqondakali futhi kawangeni kumuntu. Akwethusi lokhu. Inhloso yokuqala yawo wonke Amazwi kaNkulunkulu akukhona ukuthi abantu bazuze indlela yokwenza noma ikhono; esikhundleni salokho ngenye yezindlela uNkulunkulu asebenze ngayo kusukela ekuqaleni kuze kube namuhla. Empeleni, emazwini kaNkulunkulu abantu bayazizuza izinto nemimangaliso, noma izinto ezithinta uPetru, uPawulu kanye noJobe—kodwa yilokhu obekufanele bakuzuze, nabanekhono lokukuzuza, futhi, njengoba kufanelekile esimeni sabo, sekufikile ovuthondabeni lwako. Kungani umphumela wokuthi uNkulunkulu ucela ukuba kufinyelelwe kuYe awuphakeme, nakuba Ekhulumile ngamazwi amaningi kangaka? Lokhu kuxhumene nesijeziso akhuluma ngaso, nokuthi ngokujwayelekile, kutholakala abantu bengazange babone. Namuhla, abantu babekezelela izinkathazo ezivela zihlasela Amazwi kaNkulunkulu. Ngokungajulile, akukho noyedwa wabo obukeka kuke kwenziwe okuthile kuye, abantu sebeqalile ukukhululeka ekwenzeni umsebenzi wabo, kanti abenzi bomsebenzi bakhushulelwe ekubeni ngabantu bakaNkulunkulu—futhi ngalokhu, kubukeka kubantu kungukuthi bangenile enjabulweni. Eqinisweni, okuyikhonakhona ukuthi, kusukela ekuhlanzweni, sebengene esijezisweni esisinda ngokwengeziwe. Njengoba uNkulunkulu esho, “Izinyathelo zomsebenzi waMi zihlobene kakhulu esinye kwesinye, esilandelayo sikhulu kunesilandelayo.” uNkulunkulu unyule abenzi bomsebenzi ebakhipha emgodini ongenasiphelo wabaphonsa echibini lomlilo nomoya oshisayo, lapho isijeziso sisibi kakhulu khona. Ngakho baba nenkathazo enkulu kakhulu, lapho bengakwazi nokubaleka khona. Ngabe isijeziso esinjalo kasisibi kakhulu? Uma kade usendaweni ephezulu, kungani abantu benomuzwa wokukhathazeka esikhundleni senjabulo? Kungani kuthiwa uma bekhululwa ezandleni zikaSathane, banikezelwa udrako omkhulu obomvu? Uyakhumbula ngenkathi uNkulunkulu ethi, “Ingxenye yokugcina yalo msebenzi iqedelelwa ekhaya likadrako omkhulu obomvu”? Usakhumbula lapho uNkulunkulu ethe khona, “Ubunzima bokugcina bunamandla, ubufakazi bukaNkulunkulu obunamandla phambi kukadrako omkhulu obomvu”? Uma abantu benganikelwa kudrako omkhulu obomvu, bangaba kanjani nobufakazi phambi kwaKhe? Ngubani owake washo amazwi afana nathi “Ngimehlulile uSathane” emva kokuzibulala bona? Ukuzibulala emva kokuthatha inyama yabo njengesitha—kukuphi ukubaluleka kwalokhu? Kungani uNkulunkulu akhuluma kanje? “Angizibuki izibazi zabantu, kodwa Ngibheka ingxenye kubo engenasibazi, ngalokho Nganeliswe” Uma uNkulunkulu ubefisa ukuthi labo abangenasibazi mababe yinkulumo yaKhe, kungani ekhulume amagama amaningi kangaka ngokuqinisile nangokubekezela ohlangothini lomuntu ukubuyisa izinduku azibhekise emibonweni yabantu? Kungani engazihlupha ngalokho? Kungani ezikhathaza ngokwenza leyo nto? Lokho kukhombisa ukuthi kukhona ukubaluleka okuqinisileyo kuNkulunkulu osenyameni, ukuthi ubengeke “asuse” inyama emva kokuba senyameni kanye nasekuqedeni umsebenzi waKhe. Kungani kuthiwa “igolide lingeze laba ngelingenasisihla nomuntu ngeke abe ngongenasici”? Angachazwa kanjani la mazwi? Kuchaza ukuthini ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngokubaluleka komuntu? Emehlweni abantu ngokwawo, inyama ivela ingakwazi kwenza lutho, noma yeswele kakhulu. Emehlweni kaNkulunkulu, lokhu akubalulekile nakancane—kepha kubantu, yindaba enkulu. Kungathi abakwazi nhlobo ukuxazulula le nto futhi kumele isetshenzwe wumfanekiso wasezulwini uqobo—akukhona ukuqonda kwabantu lokhu? “Emehlweni abantu, “Ngiyinkanyezi nje encane” eyehle isuka esibhakabhakeni, inkanyezana encane ezulwini, nokufika kwaMi emhlabeni namuhla kwesekelwe nguNkulunkulu. Umphumela walokho, ukuthi abantu sebeze baletha izihumusho eziningi zamazwi ‘ngaMi’ ‘noNkulunkulu,’” Njengoba abantu bengelutho, kungani uNkulunkulu eveza ukwazi kwabo ngezinhlangothi ezahlukahlukene? Ngabe lokhu nakho kungukuhlakanipha kukaNkulunkulu? Ngabe akukhona ukuthi awasile amazwi anje? Njengoba uNkulunkulu ethi, “Nakuba ikhona indawo engiyenzile ezinhliziyweni zabantu, abadingi ukuthi Ngihlale khona. Esikhundleni salokho, balinda “Ongcwele” ukuthi afike masinyane ezinhliziyweni zabo. Ngenxa yokuthi ubunjalo baMi buphansi kakhulu, angizilingani izidingo zabantu bese ngalokho ngisuswa yibo.” Ngenxa yokuthi ukulinganisa komuntu uNkulunkulu “kuphakeme kakhulu,” izinto eziningi “kazinakuzuzwa” uNkulunkulu, okumenza abe “sebunzimeni.” Abazi abantu ukuthi lokho abakucela kuNkulunkulu kungukuqonda kwabo. Futhi ngabe lokhu akuyona incazelo yangempela kwelokuthi “Umuntu ohlakaniphile angaba yisisulu sobuhlakani bakhe na”? Lokhu ngeqiniso kungukuthi “kuhlakaniphe njengomthetho, kodwa manje kuyisiphukuphuku”! Entshumayelweni yakho, ucela abantu ukuthi banikele ngoNkulunkulu abamqondayo, ngabe uNkulunkulu omqondayo usehambile? Azohumusheka kanjani Amazwi kaNkulunkulu athi “Angiceli lutho oluningi kumuntu”? Akuwona awokwenza umuntu aziqhelelanise futhi angemukeli, kodwa awanike ukuqonda okungenasici Amazwi kaNkulunkulu—uyabona? Ngabe uNkulunkulu osenyameni ngempela “‘nguMina’ ophakeme nonamandla” njengoba abantu becabanga?
Nakuba kukhona labo abawafundile amazwi akhulunywe nguNkulunkulu futhi abakwaziyo ukunikeza uhlaka lwawo, ngubani okwazi ukukhuluma ngenhloso yokugcina kaNkulunkulu? Yilokhu umuntu akwesweleyo. Noma kungezunakwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma evela ngakuluphi uhlangothi, inhloso yaKhe ephelele ukwenza abantu bamazi uNkulunkulu osenyameni. Ukuba bekungekho ukungabi nobungcwele—uma konke abenakho bekuyisinongo sikaNkulunkulu ezulwini— okulandela lapho ukuthi bekungezuba nasidingo sokuthi uNkulunkulu asho izinto eziningi. Kungashiwo ukuthi lokho abakweswele abantu kusiza ngokuthi kube yizinto ezihambisanayo namazwi kaNkulunkulu. Okungukuthi, okwehlele umuntu yisendlalelo sokushiwo nguNkulunkulu ngokuqonda kwabantu, ngakho futhi, abantu benza amazwi kaNkulunkulu. Ngokujwayelekile, lokhu kuqondene nokushiwo nguNkulunkulu ngokuqonda kwabantu—kungale ndlela kuphela lapho kungashiwo khona ukuthi yinhlanganisela yethiyori kanye neqiniso, kungaleso sikhathi kuphela lapho abantu bengenziwa ngempumelelo khona ukuthi bazazi bona uqobo. Kungaba yini ukubaluleka kokuthi uNkulunkulu osenyameni akwazi ukufanelana nokuqonda kwabantu uNkulunkulu ebe afakaza kuYe? Eqinisweni kungenxa yokuthi uNkulunkulu usebenza emi ngasohlangothini olungeluhle, esebenzisa ukuqonda kwabantu ukukhanyisa amandla aKhe amakhulu. Akukhona ukuhlakanipha kukaNkulunkulu lokhu? Konke uNkulunkulu akwenzela uwonkewonke kuhle—ngakho kungani kungadunyiswa kulesi sikhathi? Uma izinto bezifinyelele ezingeni elithile, noma kube ukuthi bekufike usuku, wena, njengoPetru, bewuzokwazi ukwenza imikhuleko esukela ngaphakathi ekujuleni kwakho ngapha usekulingweni? Ngaphandle kuphela, njengoPetru, usakwazi ukudumisa uNkulunkulu usesandleni sikaSathane lapho bekuzoba khona iqiniso “ekukhululweni kukho ukuboshwa nguSathane, ekunqobeni inyama, kanye nasekunqobeni uSathane.” Ngabe lokhu akubona ubufakazi bukaNkulunkulu obungokweqiniso langempela? Yilokhu kuphela okuwumphumela wempumelelo “ubungcwele busondela ukuzokwenza okuthile kanye nomoya okasikhombisa wandiswa ekusebenzeni nomuntu,” ngalokho, futhi, kungaba wumphumela ozuzwe “wuMoya ophuma enyameni.” Ngabe izenzo ezinjalo ziyiqiniso? Bewukujwayele ukulalela iqiniso, khona-ke unalo ulwazi lweqiniso ngeqiniso lanamhlanje? “ANgiceli lutho olungako kumuntu, kodwa abantu bakholwa ngenye indlela. Ngakho-ke, “ukuzithoba” kwabo kuvela eminyakazweni yonke yabo. Bavame ukwethembeka ngokuhamba phambi kwaMi beNgihola, besaba ngokujulile ukuthi ngizolahleka, bethukile ukuthi ngizoduka ehlathini lakudalo ekujuleni kwezintaba. Ngalokho, abantu baNgiholile baqhubeka, besaba ngokujulile ukuthi Ngizohamba Ngingene emhumeni.” Luyini ulwazi lwakho lwala mazwi alula—ngabe ngokweqiniso uyakwazi ukuqonda izimpande zamazwi kaNkulunkulu kulokhu? Ngabe uke waqaphela ukuthi uNkulunkulu ukhulume amazwi anjena ekhulumela kukuphi ukuqonda kwakho? Ngabe ukuqaphela kwakho nsuku zonke kukuleli phuzu? Emushweni wokuqala engxenyeni elandelayo, yini elandela masinya emva kokuthi, uNkulunkulu athi, “Kodwa abantu abayazi intando yaMi bese beqhubeka nokukhulekela izinto kiMi, kungathi ukunotha engikwehlisele kubo akuzanelisi izidingo zabo, kungathi abakufunayo kungaphezu kwengikuhlinzekile.” Kulo musho kuyabonakala ukuthi ukuqonda kwakho yikuphi. uNkulunkulu akakhumbuli noma acwaninge okwenzile ezikhathini ezedlule, ngakho ungazicabangi izinto zesikhathi esedlule. Okubaluleke kakhulu ukuthi uyakwazi ukudala “umoya kaPetru esikhathini sokugcina” endleleni yesikhathi esizayo—unakho ukukholwa kokukwamukela lokhu? Okucelwa nguNkulunkulu kumuntu akulutho ngaphandle kokuthi alingise uPetru, ukuthi abantu ekugcineni bangaphoqa indlela yokuletha ihlazo kudrako omkhulu obomvu. Kungenxa yalokhu ukuthi uNkulunkulu athi, “Ngethemba ukuthi abantu bazimisele ukusebenzisana naMi. Angiceli ukuthi baNgiphekele ukudla okumnandi, noma balungise endaweni ethile efanelekile ukuba ngibeke khona ikhanda….” Emhlabeni, abantu bacelwa ukuthi babe “nomoya kaLei Feng” ngeminyaka yama-1990, kodwa endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu ucela ukuthi udale “isitayela esingajwayelekile sikaPetru.” Uyakuqonda ukuthi lokho yintando kaNkulunkulu? Uyakwazi ngokweqiniso ukukwenza lokhu?
“Ngihamba phezu kwemikhathi, futhi ngenkathi ngihamba ngibuka abantu bomkhathi ngokuphelela kwawo. Oquqabeni lwabantu bomhlaba, akekho noyedwa oseke wawufanela umsebenzi waMi noma othande Mina ngokweqiniso. Ngakho, kulesi sikhathi ngiphefumula ngokukhathazeka, abantu bayahlakazeka masinyane, abasezubuye bahlangane, besaba ngokujulile ukuthi “Ngizobabamba bonke ngenethi eyodwa’” Abaningi abantu, mhlawumbe, bathola la mazwi elukhuni kakhulu ukuwaqonda. Babuza ukuthi kungani uNkulunkulu engaceli izinto eziningi kumuntu, phezu kwalokho uphefumula ngokukhathazeka ngenxa yokuthi akukho noyedwa ongena khaxa emsebenzini waKhe. Ngabe kukhona ukuziphikisa kulokhu? Ngokusobala nje, kukhona—kodwa ngokweqiniso, akukho ukuziphikisa. Mhlawumbe wena uyakhumbula ngenkathi uNkulunkulu ethi, “Wonke amazwi ami azoba nomphumela engiwufunayo.” Ngenkathi uNkulunkulu esebenza esenyameni, abantu begqolozele kuYe zonke izenzo ukubona ukuthi empeleni yini azoyenza. Ngenkathi uNkulunkulu efeza umsebenzi waKhe omusha ewubhekise kuSathane emhlabeni kamoya, kube khona, ngamanye amazwi, ukukhiqizwa kwazo zonke izindlela zokuqonda kubantu emhlabeni ngenxa kaNkulunkulu osenyameni. Ngenkathi uNkulunkulu ephefumula ngokumangala, okungukuthi, ngenkathi ekhuluma ngokuqonda kwawo wonke umuntu, abantu bazama ngawo wonke amandla ukulungisa, nalapho kwaze kwaba khona labo abakholwa ukuthi kabanalo ithemba, ngokuba uNkulunkulu uthi bonke labo abamqondayo Yena bayizitha zaKhe—kubo bonke labo abamqondayo Yena bayizitha zaKhe—ngakho-ke bangenza kanjani abantu ukuthi “bangahlakazeki” ngenxa yalokhu? Ikakhulukazi namuhla, uma isijeziso sesifikile, abantu sebesaba kakhulu ukuthi uNkulunkulu uzobaphelisa. Bakholwa ngukuthi emva kokujeziswa kwabo, uNkulunkulu “uzobabamba bonke ngenethi eyodwa.” Kube ngukuthi amaqiniso kawanjalo: Njengoba uNkulunkulu ethi, “Angifisi ‘ukuthumba’ abantu ekusolweni kwabo, bengezuphunyula. Ngenza nje umsebenzi okumele ngiwenze. Ngizele ukuzocela umuntu ukuba “asize”; ngoba ukuphatha kwaMi kweswele izenzo zomuntu, okungenzeke ukuthi uqedelwe ngokuphelele umsebenzi waMi, okuvimbela umsebenzi wami ukuqhubeka ngempumelelo.” Intando kaNkulunkulu ayibhekisiwe emsebenzini waKhe ukuba uphele lapho abantu befa—kungaba yini ukubaluleka kwalokho? Ngokusebenza nabantu kanye nokubajezisa, uNkulunkulu ube esenza izenzo zaKhe zicace kubo. Ngenxa yokuthi abantu abakaze baqonde ukuthi isijeziso sesikhona vele ephinjeni lamazwi kaNkulunkulu, abakaze bakufake lokhu ezingqondweni zabo. Abantu abakwazi ukuphawula ngesixazululo sabo, ngakho uNkulunkulu akakwazi ukusho okuthile phambi kukaSathane, okube sekuvimba ukuqhubekela phambili komsebenzi kaNkulunkulu. Ngakho-ke uNkulunkulu uthi, “Ngake Ngammema umuntu ukuba abe yisivakashi endlini yaMi, nokho wabaleka waya le nale ngenxa yokummemeza kwaMi—kwangathi, esikhundleni sokuthi Ngimmeme njengesivakashi, Ngimlethe enkundleni yamacala. Ngakho, indlu yaMi isele ingenalutho, ngokuba umuntu uNgibalekele, uhlala njalo eqaphele ukuthi amelane naMi. Lokhu kuNgishiye Ngingenayo indlela yokufeza ingxenye yomsebenzi waMi.” Kungenxa yamaphutha omuntu emsebenzini waKhe ukuthi uNkulunkulu abeke izidingo zaKhe kumuntu. Futhi kungenxa yokuthi abantu abaphumeleli ukufeza lesi sinyathelo somsebenzi ukuze uNkulunkulu engeze lezi zinkulumo—okungukuthi ngokunembayo “enye ingxenye yomsebenzi kumuntu” yikho uNkulunkulu akhuluma ngakho. Nokho ngeke ngiye ekuthini “ngibabambe bonke ngenethi eyodwa” akhuluma ngakho uNkulunkulu, ngoba lokhu kunomthelela omncane emsebenzini wanamuhla. Ngokujwayelekile, ezinkulumeni zikaNkulunkulu ezibhekiswe emkhathini wonke, amaningi emazwini aKhe abhekiswe kumuntu—kodwa abantu kumele bayiqonde intando kaNkulunkulu; kungabhekwa ukuthi utheni, izinhloso zaKhe zinhle njalo. Kungashiwo ukuthi ngenxa yezindlela uNkulunkulu akhuluma ngazo eziningi kangaka, abantu abanalo iqiniso elipheleleyo ngamazwi kaNkulunkulu, bakholwa ukuthi amaningi kuwo Amazwi kaNkulunkulu akhulunywa ngenxa yezidingo zomsebenzi waKhe, aqukethe okuncane okuliqiniso, okubashiya bengakwazi ukucabanga kahle bengaphakami ngemicabango—ngokuba ekuqondeni kwabo, uNkulunkulu uhlakaniphe kakhulu, abakwazi ukufinyelela nakancane kuYe, kungathi abazi lutho, abanayo ngisho encane inkomba ngokuthi kumele bawadle kanjani Amazwi kaNkulunkulu. Abantu benza Amazwi kaNkulunkulu abe yinto ekude neyinkimbinkimbi—njengoba uNkulunkulu ethi, “abantu bahlala befuna ukufaka isinongo ezinkulumeni zaMi.” Ngenxa yokuthi imibono iyinkimbinkimbi, futhi “ayifumaneki” kuNkulunkulu, ingxenye yamazwi kaNkulunkulu alawulwa ngumuntu, emshiya engenakho azokukhetha ngaphandle kokukhuluma ngendlela eqondile nelula. Ngenxa yokuthi izinto ezicelwa ngabantu “ziphakeme kakhulu,” nangokuthi ngoba imicabango yabo inothile kakhulu kakhulu—kungathi bayakwazi ukuwelela endaweni kamoya ukubona izenzo zikaSathane—lokhu kunciphisile Amazwi kaNkulunkulu, ngokuthi ukwanda kwalokho uNkulunkulu akushoyo, kuba ukwanda nokukhula kobuso babantu abangathokozile. Kungani bengavele balalele, esikhundleni sokuninga ngesiphelo sabo? Ikuphi inzuzo kulokhu?